Dalka jamhuuriya jasiirada Fiji (Republic of the Fiji Islands). waa wadan jasiirado ka sameesan oo ku yaalo Ooshiyaaniya, Koonfurta Badweynta Baasifik. Fiji waxee ka koobantahay 9 jasiiradood oo waaween iyo 300 oo jasiiradood oo yar yar oo markooda hore ka sameesmay fulkaano. jasiirada ugu ween waxaa la dhahaa (Viti Levu), waa meesha oo caasimada ku taalo. wadanka waa meel oo buuraha ku badan, Jawiga neh roob aa aad uuga da'o. Dhulka waa dhul aad iyo aad uuga baxo beero oo laga gurto miro aad u adan.
Taariikh Kooban[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Dalka Fiji waxa uu kamid yahay wadamada koofurta bada Pasicifa ee loo yaqan Oceana. Dalka Fiji waa dalka aduunku ugu bariyeeya ee ugu xiga dacalka bari ama waa dalka ay qoraxdu ugu soo hor baxdo. Fiji waxa uu ka koobanyahay jasiirado yar yar oo ku yaal bariga dalka Australia. Caasimada dalka jamhuuriya jasiiradaha Fiji waxa layidhaa Suva, waxana ay ku talaa jasiirada ugu wayn jasiiradaha uu ka koobanyahay dalka Fiji oo ku taal badhtamaha dalka. Dadka ku dhaqan magaalada caasimada u ah dalka jamhuuriyaha jasiiradaha Fiji lagama hayo tirokoob dhab ah.
Badka[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Bedka ay ku fadhiiyaan jasiiradaha Fiji waxa lagu qiyaasaa 7,054.09, oo (mayl laba jibaaran) una dhiganta 18,270.00, oo (kiiloo mitir laba jibaaran). Dalka jasiiradaha Fiji waxa uu ku dhowyahay baaxada gobolka (New Jersey) ee dalka Maraykanka.
Dadka ku dhqan jasiiradaha Fiji waxa lagu qiyaasaa (944,720) ruux, waana tirakoobkii laga qaaday sanadkii 2010-kii. Saadaasha dadka reer Fiji ee sanadka 2050-ka waxa lagu wadaa in ay kor u dhaafi doonaan 1.4milyan ruux.
Luuqadaha lagaga hadlo jasiiradaha Fiji waxa kamid ah luuqada ingiriisiga (English) oo ah luuqada koowaad ee dalka, waxa kale oo ay ku hadlaan dadka ku dhaqan dalka jasiiradaha Fiji luuqada maxaliga ah ee Fijian iyo Hindustani-ga.
Dadka aqoonta leh ee u dhashay dalka jasiiradaha Fiji waxa lagu qiyaasaa boqolkiiba 91.6%.
Diimaha ay kala haystaan dadka Fiji waxa kamid ah: diinta Christian-ka oo ay haystaan boqolkiiba 52%, dadka Kiristanka ah ee reer Fiji waxa ay u kala baxaan madaahiibta (Methodist oo ay haystaan boqolkiiba 37% iyo Roman Catholic, oo ay haystaan boqolkiiba 9%), diinta Hinduuga waxa haysta boqolkiiba 38%, Diinta Islaamkana waxa haysta boqolkiiba 8%, guud ahaan diimaha soo hadhayna dadka haysta waxa lagu qiyaasaa boqolkiiba 2%.
Ragga u dhashay dalka jasiiradaha Fiji waxa ay da’doodu gaadhaa 65-sano, halka dumarka reer Fiji ay ka jiraan 70-sano. Dawlada: Qaab dhismeedka Dawladda jasiiradaha Fiji waa nidaamka jamhuuriga ah (Government Type republic). Lacagta: Lacagta laga isticmaalo jasiiradaha Fiji waxa layidhaa Fijian dollar (F$). Warshadaha: Warshadaha dalka jasiiradaha Fiji waxa lagu farsameeyaa sonkorta, dharka, dahabka, Qalin (Silver-ta) iyo Copra. Dalxiiska: Dalka jasiiradaha Fiji waxa ka jira goobo soo jiita dalxiiska oo ay u dalxiis tagaan dad badani.
Beeraha: Beeraha dalka jasiiradaha Fiji waxa laga beeraa dalagyo ay kamid yihiin: Sonkor-khaanta, Qumbaha, Cassava, Bariiska, Baradhada macaan iyo Muuska.
xoolaha laga dhaqdo dalka jasiiradaha Fiji waxa kamid ah Lo’da, Adhiga gaar ahaan Riyaha, Khansiirka iyo Fardaha. Waxa kale oo dadka ku dhaqan jasiiradaha Fiji ay lasoo baxaan kaluunka. Dhulka la isticmaalo ee dalka jasiiradaha Fiji waxa lagu qiyaasaa boqolkiiba 10%.
Khayraadka: Khayraadka dabiiciga ah ee dalka jasiiradaha Fiji waxa kamid ah geedka timber-ka, Kaluunka, Dahabka, copper, saliida dalka ku kaydsan iyo awooda biyaha lagaga dhaliyo tamarta ee (hydropower).
Forgotten Slaves of the South Seas
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiji&oldid=219440"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 13 Oktoobar 2021, marka ee eheed 11:08.